ukubulala amagciwane ngama-wipe
Ama-75% Osula Utshwala
Isula ini, kuphi, kungani nokuthi kanjani
ngomphathi ku 21-01-20
Ubuchwepheshe bezindwangu obuthandwa umhlaba wonke Ngo-2009 i-spunlace ihola ngamathoni angama-358,600 kanye nama- $ 5.5 billion ekuthengisweni, cishe uhhafu wemakethe isiyonke. Lokhu kulandelwa yi-airlaid, enamanani amathoni ayi-188,287 nokuthengisa okufika ku- $ 2.3 billion ngo-2009. Obunye ubuchwepheshe obukhulu buhlanganisa amakhadi ...
Kungani ukusula ngamagciwane kungabuyi
Ngenkathi iphepha lasendlini yangasese selibuyele kakhulu emashalofini selokhu kuthengwe ukwethuka kwezinsuku zokuqala zobhadane ngoMashi, ukusulwa kwamagciwane kusalokhu kungatholakali. Isitshalo sokukhiqiza iphepha saseProcter & Gamble ePennsylvania asikaze sibhekane nokushoda kwempahla eluhlaza ngoba uginindela waso uza ikakhulukazi ...
I-Walmart ibika ngokushoda kwephepha lasendlini yangasese nezinto zokuhlanza kwezinye izitolo
Abathengi baseNew York (CNN Business) baphinde balayishe izimpahla zamaphepha nezinto zokuhlanza ezindaweni zase-United States ezihlaselwe kakhulu ukwanda kwezifo ze-coronavirus, okuholela emashalofini angenalutho kwezinye izitolo zaseWalmart. Izikhulu zaseWalmart (WMT), okuyiyona edayisa kakhulu kuleli, ngoLwesibili th ...
Amathawula aphezulu we-10 Best Microfiber kuzibuyekezo ze-2021
Kungani amathawula we-microfiber azuze idumela elimangalisayo esikhathini esedlule? Lokhu kuyimpikiswano enkulu kuzingxenyekazi ezahlukahlukene ngokusebenza kwe-microfiber. Kepha, uma kukhona okuheha ukunaka okukhathazayo, kunezinto eziningi ezinhle ngakho. Abaphenyi besayensi bafakazele ukuthi mi ...
Amathiphu wokukhipha amagciwane ezingutsheni zakho ngesikhathi se-COVID-19
Amathiphu wokukhipha amagciwane ezingutsheni zakho ngesikhathi se-COVID-19 Mashi 20, 2020 Ngenkathi abaningi bethu behlala ezindlini futhi bezijwayeza ukuqhela emphakathini, kunabantu abaningi abamane nje bakuthole lokho kudla futhi kufanele bashiye amakhaya abo benze izinto ezifana nomsebenzi noma ukuya e esitolo ukuze uthathe izinto ezibalulekile. Ngakho-ke, uma ...
Indlela efanele yokusebenzisa amaLysol Wipes
Ukuqeda amagciwane ngama-wipe afana nalawo avela kuLysol, Clorox, kanye nemikhiqizo ejwayelekile kulula, kulula ukuyisebenzisa, futhi kungaba yindlela ephumelelayo yokuhlanza amagciwane ezindaweni eziqinile ekhaya lakho uma uzisebenzisa ngendlela efanele. Ingabe unecala lale mikhuba? Ukholelwa ukuthi wonke ama-wipe adalwe alingana Akufundi ...
Izindwangu ezi-7 ezihamba phambili zeMicrofiber zango-2021
Imiqulu emikhulu yobubanzi bokusula i-substrate ifakwa emishini lapho isikwe kububanzi obudingekayo. Indwangu engesiyo eyelukiweyo ifakwa emshinini wokumboza lapho isigaba samanzi sisetshenziswa ngezindlela eziningi: ukusebenzisa okungalukanga ngomkhombe wesisombululo, ukufafaza amashidi nge-liqu ...
Ukwanda kwesidingo sokususa amagciwane ngama-wipes kushayela ukukhula, kubika
I-OHIO - Imboni yomhlaba yokusula engafakwanga izofinyelela ku-US $ 19.64 billion ngo-2020, njengoba ukubulala amagciwane kanye namanye ama-wipe angalukwanga abonwa njengamathuluzi abalulekile okuvimbela ukusabalala kobhubhane lwe-coronavirus. Ekwehliseni amagciwane ukukhula kwama-tonnage ngo-2020 kuzoba ngama-36.8%, ngokusho kwedatha evela kuSmith omusha ...
Abathengisi Bavimbela Ukusulwa Okumanzi E-UK nase-Ireland
IHolland & Barrett isimemezele ukuvinjelwa okuphelele ekuthengisweni kwayo yonke imikhiqizo emanzi ezitolo zayo eziyi-800 UK kanye nase-Ireland, ngayo yonke imikhiqizo emisha yokusula nokunye okuhlukile esikhundleni sayo kufakwe ezinye izindlela ezinobungani bemvelo nezisimeme ngasekupheleni kukaSepthemba 2019. kuthengiswa e-UK ...
I-PLMA Imemezela i-PLMA Live! Iviki Lelebula Elizimele LangoFebhuwari 1-5
ENEW YORK — I-Private Label Manufacturers Association iyajabula ukumemezela umcimbi omusha futhi ongakaze ubonwe ngoFebhuwari 1-5, 2021: PLMA Live! Yethula Iviki Lelebula Langasese. Lesi simemezelo siza njengoba iNhlangano ibone kunesidingo sokuthi ikhansele umbukiso wayo we-2020 Private Label Trade Show ngokukhanya ...
IZITOLO ZOKUGCINA ZIBEKA UMKHAWULO WOKUTHENGA OMUSHA EKUPHELISENI AMASIPI KANYE NEZINYE IZINTO
NgoNovemba 6th, iCNN Business yakhipha udaba lukaNathaniel Meyersohn olwalunesihloko esithi “Ezinye Izitolo Zokudla Zinciphisa Iphepha Langasese kanye Nokubulala Amagciwane Ukusula Okuthengiwe.” Ucezu lubike ukuthi amanye amaketanga amakhulu ezitolo aseqalile ukubeka umkhawulo wokuthengwa o ...
Imakethe yomhlaba wonke engafakwanga ama-wipe kulindeleke ukuthi ifinyelele ku- $ 19.6 billion ngo-2021
(UK, 28 Novemba 2016) Ikusasa lamaGlobal Nonwoven Wipes kuya ku-2021 lithi imakethe yomhlaba engafakwanga ama-wipe ilinganiselwa ku- $ 14.8 billion futhi izodla amathani ayi-1.1 million we-nonwovens ngo-2016. Ngo-2021, inani kulindeleke ukuthi likhule lifike ku- $ 19.6 billion futhi lingaluki ukusetshenziswa ukuze ikhule iye kumathani ayizigidi eziyi-1.4 ...
Amadivayisi: No.20 ZhaoYu Road, FuWan Industrial Center, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China